Tag: chii chinonzi webrooming | Martech Zone
Tag: chii chinonzi webrooming
Chii chinonzi Webrooming? Izvo zvakasiyana sei kubva kuShowrooming?
China, December 8, 2016 Chipiri, Mbudzi 7, 2017 Douglas Karr
Vhiki rino ndanga ndichitsvaga kutenga zvigadzirwa zvemumhanzi zvedu studio Ini ndinowanzo bhuroka kubva mukugadzira saiti, ipapo hunyanzvi e-commerce saiti, zvitoro zvekutengesa, uye Amazon Handisi ndega. Muchokwadi, 84% yevatengi vanoongorora Amazon vasati vatenga Chii chinonzi Webrooming Webrooming - kana mutengi achienda kuchitoro kunotenga mushure mekutsvaga chigadzirwa online. Chii chinonzi Showrooming Showrooming - kana mutengi achitenga online mushure mekutsvagisa inf infographic